स्वास्थ्य /जिबनशैली – Classic Khabar
Jan112022 by News DeskNo Comments
काठमाडौँ बन्यो संक्रमणको ‘हटस्पट’ एकै दिन थपिय सयौं संक्रमित
पछिल्लो २४ घण्टामा १४ सय ४६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ११ हजार चार सय २९ जनामा गरिएको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षणमा यो संख्यामा संक्रमित पुष्टि भएका हुन् । यस्तैगरी, संक्रमणबाट दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई सय ५५ जना मुक्त भइ अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म संक्रमणबाट ११ हजार ६ सय ६ जनाको मृत्यु भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका भाइरस सङ्क्रमणको हटस्पट बनेको छ । उपत्यकामा एकै दिन ८७६ जना भाइरस सङ्क्रमित थपिएका छन् । नयाँ थपिएका सङ्क्रमितमध्ये यो सङ्ख्या ६० प्रतिशतभन्दा बढी हो । काठमाडौँ जिल्लामा मात्र ६७५ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने ललितपुरमा १३६ तथा भक्तपुरमा ६५ जना सङ्क्रमित थपिएका छन् । कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ? स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यका बाहेक सोमबार
Dec282021 by Classic KhabarNo Comments
३८ वर्षीया नर्स ज्योति गवली भारतको महाराष्ट्र राज्य, हिंगोलीको सिभिल अस्पताल, कार्यरत थिइन् । वितग ५ वर्षदेखि त्यहाँको प्रसूती वार्डमा कार्यरत नर्स ज्योतिले त्यसअघि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा काम गरेका थिइन्। ५ वर्ष उक्त अस्पतालको प्रसूति वार्डमा काम गर्दा उनले ५ हजार भन्दा बढी महिलालाई सुरक्षित सुत्केरी गराएको उनका सहकर्मीले बताएका छन् । जब उनी आफैँ सुत्केरी भइन् । उनले यो संसारबाट विदा लिइन्। ज्योतिले २ नोभेम्बरमा आफूकार्यरत हिंगोली सिभिल अस्पतालमै दोस्रो सन्तानलाई जन्म दिएकी थिइन् । श’ल्यक्रि’यामार्फत उनले सन्तान जन्माएकी थिइन् । उनी सुत्केरी हुने अघिल्लो दिनसम्म पनि ड्यूटीमा आएकी थिइन् । सुत्केरी भएपछि उनको निरन्तर रक्तश्राव भयो । अनेक प्रयास गर्दा पनि उनको रक्तश्राव रोकिएन । त्यसपछि उनलाई हिंगोली अस्पतालबाट अर्काे एक निजी अस्पतालमा लगियो । त्यहाँ लगेपछि चिकित्सकहरुको प्रयासबाट
Dec142021 by News TeamNo Comments
कण्डमको उचित प्रयोगले क्यान्सरका साथै संक्रमणबाट पनि जोगाउँछ: डा.नुतन शर्मा
पुरुषले यदि हरेक पटक यौन सम्पर्क गर्दा सही तरिकाले कण्डम प्रयोग गर्ने हो भने यसले गर्भ राक्नमा ९८ प्रतिशत प्रभावकारी रहने चिकित्सकहरु बताउछन् । कण्डम परिवार नियोजन तथा यौन रोगहरू सर्नबाट बचाउने एक मात्र त्यस्तो साधन हो । यसको एकोहोरो काम मात्र नभएर दोहोरो , तेहोरो भुमिका पनि रहेको स्त्री रोग विशेषज्ञ डा.नुतन शर्माले बताइन । कन्डम पुरुषको उत्तेजित लिङ्गमा लगाउने परिवार नियोजनको साधन हो । कन्डमले गर्भवती हुन नदिनुका साथै र यौनजन्य सङ्क्रमण जस्तैः एच.आई.भी र धेरै यौनजन्यहरू सर्नबाट रोक्दछ । डा.शर्मा भन्छिन ‘कण्डम परिवार नियोजनको एक साधन हो, यसको प्रयोगले पाठेघरको कुनै पनि इन्फेक्सन देखि पाठेघरमा भएको को घाउ समेत निको हुने साथै पाठेघरको क्यान्सर हुन दिदैन ।’ साधारणतया कण्डम सजिलै सँग पाउँन सकिन्छ । यो औषधी पसल लगायत स्थ्य चौकीहरूमा निःशुल्क प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी महिला स्वास्थ्य
जाडो मौसममा घाम ताप्दै बदाम खानको मज्जा नै बेग्लै हुन्छ जुन हर कोहीलाइ मनपर्छ। तर धेरैलाई थाहा भने नहोला कि यो बदाम खाँदा हाम्रो शरीरलाई फाईदै फाइदा छन्। बदाम खाँदा सहि तरिका अपनाउन भने जरुरी छ साथै सतर्क हुन पनि जरुरी देखिन्छ। बदाममा इनर्जी, फ्याट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिनको मात्रा अत्याधिक हुने गर्दा भिटामिन वा मिनरल्ससंग जोडिएका कयौं शारीरिक समस्यालाई टाढै राख्न मद्दत पुर्याउँछ । बदाम खाँदा जति मिठो छ त्यति नै शरीरको लागी फाईदाजनक छ। आउनुहोस चर्चा गरौ बदाम खाने तरिका र यसका फाईदाको बारेमाः बदाम खाने सहि तरिका र सतर्कताः - हुन त तपाईले बदाम त्यत्तिकै खाँदा पनि हुन्छ तर त्यसको सहि तरिका भने भिजाएर खाँदा राम्रो हो । विशेषज्ञहरुका अनुसार बदामलाई भिजाएर खाँदा यसमा पाईने न्यूट्रिएंट्स शरीरमा पूर्ण तरिकाले लाग्ने छ । त्यस्तै बदामलाई सख्खरसंग मिसाएर पनि खान सकिन्छ भने सलादमा पनि मिसाएर
छातीमा कफ जम्ने स’मस्याले हैरान हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् हटाउने घरेलु उपाय सबैले जानीराखौं
अहिले स्वास्थ्यमा कुनै समस्या देखिए धेरैलाई चिन्ता हुन्छ, कोरोना त होइन । तर, मौसम बद्लिने यो समयमा सामन्य स्वास्थ्य समस्या देखापर्छ । कसैलाई रुघा लाग्ने, खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, कफ जम्ने, जोर्नी दुख्ने आदि । कतिपय अवस्थामा घरेलु उपचारबाट पनि यस्ता समस्याहरुबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । खासगरी खोकी लाग्ने कफ जम्ने समस्यामा यी घरेलु उपचार प्रभावकारी हुनसक्छ। मह र कागती: एक चम्चा अर्गानिक मह र २ चम्चा कागतीको रस मिसाएर पिउनुपर्छ । यसले घाँटीलाई आराम पुर्याँउछ। महमा एन्टीब्याक्टेरियल र एन्टी फंगल गुण पाइन्छ । त्यस्तै कागतीमा भिटामिन सीको भरपुर मात्रा पाइन्छ जसले घाँटीलाई तुरुन्त आराम पुर्याउँछ । मरिच: मरिच केही पिरो र स्वादमा तिख्खर हुन्छ । यो श्वासप्रशवसको समस्या समाप्त गर्नको लागि आयुर्वेदमा चमत्कारी औषधि मानिन्छ । यसले कफलाई समाप्त गरिदिन्छ । मरिचमा पाइपरलांगमाइन नामक रसायनिक तत्व पा
Nov262021 by News DeskNo Comments
म’हिना’वारीको समयमा यौ;न सम्पर्क गर्न हुन्छ की हुदैन ? निसन्ता’नपनको उप’चार के हो ? डा. सबिनाको सु’झाब (भिडियो सहित कुराकानी)
डा. सबिना सिं’खडा बिगत लामो समय देखी निसन्तान दम्पतीहरुको लागी कसरी सन्तान प्रदान गरिन्छ भन्ने क्षेत्रमा काम गरिरहेकी छन् ।बारदान फर्टि’लिटी सेन्टर काडमाण्डौंकी संचालिका समेत रहेकी डा. सिं’खडासंग महि’लाका समस्या र बाँझोप’नको बारेमा धेरै अनुभव छ । बिशेषत बाँ’झोपन भएका वा भनौ सन्तान नभएका’हरुको उपचारमा उनी रातदिन खटिएकी छन् । यौन र प्रजनन एक अर्कामा परि’पुरक भएकाले कुनै पनि परिवार नियाजनको साधन प्रयोग नगरी एक बर्ष सम्म यदी कुनै दम्पतीको बच्चा हुँदैन भने त्यो बाँझोपन हुने उनको धारणा छ । बाँझोपन वा निसन्तानपन भयो भन्दैमा आत्ति’न हुँदैन र यसको उपचार संभव भएको समेत उनले बताईन्म हिनावा’रीको समयमा हुने यौनसम्पर्कलाई धेरैले जिज्ञासाको रुपमा लिने भएकाले उक्त समयमा सकभर यौनकार्य नगर्न पनि उनले सुझाब दिएकी छन् ।-(स्कटनेपालबाट) हेनुैहास् उहाँसंग गरिएको कुराकानी ।
Nov202021 by News TeamNo Comments
दुई महिनाको शिशुको पौने चार किलोको ट्युमर निकालियो, कान्ति अस्पतालमा भयो सफल शल्यक्रिया
दुई महिना अघि जन्मेको एक शिशुमा बढ्दै गएको पौने चार किलो तौलको ट्युमर कान्ति अस्पतालका चिकित्सकहरुलाई श ल्यक्रि या गरि हटाईदिएका छन् । सप्तरी महादेवीकी सिता देवी सदाले दुई महिना अघि जन्माएको शिशु (छोरा) देखिएको स्याक्रोकक्सीजियल टेराटोमा भन्ने ट्युमर सोमबार करीब २ घण्टा लामो श ल्यक्रि या गरि हटाइदिएका हुन् । शल्यक्रियाको नेतृत्व गरेका बरिष्ठ बाल शल्य चिकित्सक डा विजय थापाले शल्यक्रिया गर्नु अघि दुई महिना उमेरको सो शिशुको तौल ६ किलो २ सय ग्राम रहेको बताए । श ल्यक्रि या गरी ३ किलो ७५० ग्रामको ट्युमर हटेपछि अहिले शिशुको तौल २ किलो ४५० ग्राम रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार स्याक्रोकक्सीजियल टेराटोमा भन्ने ट्युमर नवजात शिशुमा देखिने एक खालको दुर्लभ ट्युमर हो । जन्मजात देखिने यो ट्युमर बालकहरुमा भन्दा बालिकाहरुमा बढी देखिन्छ । तर सोमबार शल्यक्रिया गरेको केश भने बालकमा देखिएको हो । डा थापाल
Nov182021 by News TeamNo Comments
प्रायजसो धेरै महिलाहरु ग’र्भवती छु वा छैन् भन्ने कुराको बारेमा परिक्षण गर्न स्वास्थ्य चौकी जान लाज मान्ने गर्छन् । त्यसकारण घरेलु तथा प्राकृतिक तरिकाबाट पनि ग’र्भवती भए नभएको सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ ।पछिल्लो समय अ।शुरक्षित यौ, न स, म्पर्कका कारण ग’र्भप’तन गर्ने किशोरीहरुको संख्या बढ्दै छ । शिक्षित भएर पनि बिना अस्थायी साधनको प्रयोग हुने यस्तो अ,शुरक्षित सम्पर्कले गर्दा किशोरी अवस्था बाटै महिलाहरुमा स’मस्या हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।महिलाले आफ्नो म,हिनावारीको समय ख्याल नगर्दा र भईपरी आउने समयमा अस्थायी साधनको प्रयोगले नहुनाले नेपालमा ग र्भपतन गराउने किशोरीहरुको संख्या बढेको बरिष्ठ प्रसुती तथा स्त्री रोग बिशेषज्ञ डा. नुतन शर्माले बताउनु भयो । एक अन्र्तवार्ताको क्रममा डा.शर्माले एक पटक पनि म,हिनावारी नभएकी १३ बर्षिय किशोरी समेत ग’र्भवती भएर आफु कहाँ आएको समेत बताउनु भयो । उहाँले
Oct122021 by Classic KhabarNo Comments
आलुलाई हामिले तरकारीको राजा मान्दछौ । जुनसुकै तरकारीसँग मिल्ने आलु भान्सामा दैनिक प्रयोग हुन्छ । हामिले रातो, सेतो, छिर्केमिर्के आलु देखोका छौ । तर यस्तो आलु पनि हुन्छ जुन वैजनी रंगको हुन्छ । जसको सेवनले कहिल्यै बुढो भइदैन । यस आलुले बिभिन्न रा्ेगहरुबाट बचाउछ । यो आलु हामीले सेवन गरेको भन्दा हल्का फरक हुन्छ । यो आलु बनाउन पाचँ साल लागेको बताइएको छ । कृषि बैज्ञानिकले आलुका करिब २० नयाँ प्रजाति तयार गरेका छन् । यो आलुमा भिटामिन सी को मात्रा तीन गुणा बढि हुन्छ । यस हालुमा अक्सिकरण निरोधक तत्व पनि चार गुणा बढी हुन्छ । अक्सिकरण निरोधक तत्वले बुढोपन रोक्न सक्ने बताइन्छ । यसले मानिसलाई लामो आयु दिने पनि बताइन्छ । यो आलुलाई पहिला टेस्ट ट्यूबमा तयार गरिन्छ अनि खेतमा रोपिन्छ ।
Oct42021 by Classic KhabarNo Comments
पेटको वरिपरिको बोसोले धेरैलाई तनाव दिएको छ । घटाउने मन हुँदा हुँदै पनि परिस्थिति र समय नमिलेर धेरैलाई समस्या परिरहेको छ । यो बोसो घटाउनका लागि यस्तो चिज जरुरी छ, जसले बढी भन्दा बढी क्यालोरी बर्न गरोस् । केही सजिला तरिकाहरु यसप्रकार छन् । काँक्रो: बेलुकाको खाना खानुभन्दा पहिले काँक्रोको जुस वा सलाद खानुहोस् । यो पेटका लागि धेरै लाभदायी छ । यो सेवनका कारण धेरै खाना खानबाट जोगिन सकिन्छ नै, यसले पेटको झाडुको काम पनि गर्छ । जसले गर्दा बिस्तारै बोसो कम हुन्छ । धनियाँको जुस: यसमा क्यालोरी निकै कम पाइनछ भने एन्टीअक्सिडेन्टको मात्रा धेरै हुन्छ । यसको प्रयोगबाट अरु कुनै समस्या आउँदैन । यसले किड्नी ठिक राख्न समेत सघाउँछ। एलोभेरा जुस: एलोभेरा जुस धेरै बिरामका लागि उपयोगी ठानिन्छ । दिनमा एक कप यसको जुस पिउँदा पेटको बोसो कम हुन्छ। यसले कोलेस्ट्रोलको समस्या पनि घटाउँछ। ग्रिन टी: ग